Haikwanise kuwana mafaira akachengetwa pa USB yangu - Tips - TELES RELAY
HOME » MAZANO »Haigoni kuwana mafaira akachengetwa pangu USB yangu - Mazano
Les USB key, inozivikanwawo sechifambiso chekufambisa, inokubvumira kuti utakure nyore kutakura data mune imwe nhamba yekuchengetedza. Kana iwe haikwanisi kuwana mafaira nemafaira pane yako USB flash drive kana kuti uione, zvimwe zvikanganiso zvinowanzove zvichikonzera dambudziko. Somuenzaniso, iwe unogona kunge wakaisa USB drive yako uye unogona kuona kuti kuchengetedza iko kushandiswa, asi hapana faira inowanikwa. Chikonzero chinowanzovhiringidza iwe haugoni kuona mafaira ako ndeokuti ivo vari pakavanzwa.
Zvisinei, USB flash drive ingangodaro yakatapukirwa nehutachiona, mafaira angangodaro akatsigirwa pane imwe nzvimbo, USB flash drive ingangodaro yakanganisa muviri, kana mafaira nemafolisi zvingave zvabviswa. Muchikamu chino, tichakupa mhedziso yezvinetso zvekutambudza zvemarudzi ose eudhini dze USB, kana pa PC kana Mac.
NB Iri pepa rinoshandiswa rinoshandawo kune mafaira akashayikwa kunze kwemafambisi anotsvaga, mafambisi anotsvaira, uye USB mifananidzo.
Chengetai kana mafaira e USB stick ari muvanze
Kana iwe usingagoni kuona mafaira ari pa USB drive yako, inogona kunge yakavigwa mumamiriro ezvinhu. Kuti uzvione paPC yako, tanga chigadziro chekutsvaga pabhabariti rebasa, pinda cmd uye press kupinda. Muhwindo Raira Prompt iyo inotanga, pinda murairo unotevera:
attrib -h -r-s / s /dg:*.
Tsamba yacho G inofanira kuchinjwa netsamba inoenderana ne USB yako. Mushure mokupinda murairo, shandisa kupinda. Dzokera kune yako USB drive uye chengetedza kana mafaira akaonekwa. Kana zvikasati zvaonekwa, edza mamwe matanho kuti uwane mafaira akavanzwa uye chengetedza kana tsvimbo yako yeHotel yakakuvara, kana ine ine utachiona.
Ratidza mafaira akavanzwa muWindows 10
Kana uri kushandisa Windows 10, shandisa USB yako. MuFaira Explorer, tora tab kuona uye chengeta bhokisi racho Zvinhu zvakavanzwa. Tarisa kana mafaira ari pa USB drive yako zvino aonekwa. Kana izvi zvisina kudaro, iwe uchada kutarisa kana mafaira kana kuti USB stick yakasvibiswa nehutachiona.
Ratidza mafaira akavanzwa muWindows 7
Kana ukashandisa Windows 7 panzvimbo, enda kumenyu Démarrer > Control Panel, zvino sarudza Kuonekwa uye maitiro. sarudza Folder Options, ipapo enda kune tab kuona. pasi Zvinyorwa zvitsvagashingairira Ona mafaira akavanzwa, folders, uye zvinotyaira uye chengeta OK. Zvadaro taurai USB yako drive uye chengetedza kana mafaira akaonekwa. Kana vachiri kutadza kuoneka, edza deta rekudzidzira doro rakadai se WinRAR. Iwe unofanirwawo kutarisa kuvapo kwehutachiona.
USB drive haina kuratidza mafaira paMac
Kana mafaira ako aripo pane Mac, enda ku-main search bar uye uwane chiteshi. Zvadaro pinda murairo wekutevera unotevera:
zvinyorwa zvinyore com.apple.Finder
Dhinda kupinda kuti uite murairo, zvino tora pasi kiyi alttora Finder uye sarudza mutsidzira. Dzokera kune yako USB drive uye mafaira anofanira kuonekwa. Kana izvi zvisina kudaro, unofanira kutarisa utachiona pane USB yako.
Shandisa WinRAR kuti uwane mafi akavanzwa
Imwe nzira ndeyokushandisa WinRAR, iyo inoshandiswa kuchengetedza zvigadzirwa zvakanyanyiswa kana zvakavanzika. Mushure mekudzivirira nekuzadzisa kuiswa, shandisa WinRAR uye tsvaga USB yako. Ichi chishanditi chinofanira kuenzanisira zviri pachena mafaira uye mafaira e USB drive yako.
I USB drive ine virus kana yakaora
Chengetedza kana i-USB key inotapukirwa nehutachiona kuburikidza nehutachiona hwehutachiona chako. Kana pane hutachiwana, iwe unoda kuchinja hutori hwe USB.
Kana USB USB yakasvibiswa, iwe unoda kuchinja. Kuti uchinje hutori hwe USB yako kubva kuRovera Prompt, enda kumenyu Démarrer ipapo tsvagai cmd. Kumbofa cmd uye sarudza Mhanya semutungamiri. Zvadaro, pinda murairo unotevera uye shandisa kupinda:
Kana izvi zvisingashandisi uye iwe hauna kopi yedata rako, nhamo iwe haugoni kuwanazve deta iripo.
Mufananidzo: © asmati - 123RF.com